Home TOROHEVITRA FOTSORATRA TSY MISY MPANJAKA Mpilalao Football English Tantara momba ny fahazazan-jaza Todd Cantwell miampy Untold Biography Facts
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra izay malaza indrindra "Cantwell". Ny tantaranay momba ny fahazazan-jaza Todd Cantwell sy Untold Biography Facts dia mitondra aminao ny tantara feno momba ny zava-nitranga miavaka hatramin'ny fahazazany hatramin'izao.
Ny fiainana sy ny fiakaran'ny Todd Cantwell. Credits sary: ​​edp24 ary TheFA.
Eny, fantatry ny rehetra fa sambatra mahafinaritra izy eo amin'ny kianja afovoany. Na dia izany aza, vitsy monja no mihevitra ny Biography an'i Todd Cantwell izay tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Tantaran'i Todd Cantwell momba ny fahazazana sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Irakiraka Todd Owen Cantwell dia teraka tamin'ny andro 27 ny volana febroary 1998 tao amin'ny tanànan'i East Dereham any Angletera. Teraka tamin'ny ray aman-dreny tia baolina kitra izy ary misy raim-pianakaviana iray fantatra amin'ny anarana hoe Steve sy renim-pianakaviana iray izay mety manapa-kevitra ny hisintona an'i Cantwell aorian'ny famoahana ity bio ity.
Todd Cantwell dia teraka tamin'ny ray aman-dreny izay tsy dia fantatra firy. Credits sary: ​​Edp24 sy PxHere.
Marina amin'ny endriny sy ny accent, Cantwell dia firenena teratany anglisy izay manana foko fantatra. Nobeazina tao amin'ny toerana nahaterahany tao amin'ny tanànan'i East Dereham, Angletera akaikin'i Jordan sy ny rahalahiny Amber.
Nobeazina tao amin'ny East Dereham any Angletera i Todd Cantwell. Credits sary: ​​Edp24 ary Pinterest.
Nihalehibe tao Dereham i Cantwell dia zaza manana maso mena ary volo mena izay tia mijery fandaharana amin'ny fahitalavitra toy ny "Tracy Beaker" ary milalao baolina miaraka amin'ny namany. Nanonofy izy ny ho lasa mpilalao baolina kitra matihanina tamin'ny fahazazany ary notohanan'ny ray aman-dreniny "Arsenal mpankafy" izay namelona ny tanjony nandritra ny taona maro.
Tantaran'i Todd Cantwell momba ny fahazazana sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Fanabeazana sy fanabeazana
Cantwell dia manana ny fianarany voalohany na ny fianarany ao amin'ny sekolin'ny Kings Park any Dereham, Angletera alohan'ny hanohizana ny sekoly ambony Northgate - any Dereham, Angletera ihany koa ho an'ny fianarany faharoa.
Sarin'i Todd Cantwell amin'ny maha-mpianatry ny sekolin'ny Kings Park any East Dereham, Angletera. Sary: Edp24.
Nandritra ny andrim-panjakana fampianarana roa, Cantwell dia mpilalao baolina kitra mavitrika indrindra indrindra any Northgate High izay misy ny fandraisana anjara nataony tamin'ny fahombiazan'ny ekipan'ny sekoly dia voalaza fa "etsy ambony sy mihoatra".
Tantaran'i Todd Cantwell momba ny fahazazana sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Mihazakazaka haingana be ve ity mpanoratra bio ity? tsia mazava ho azy. Mitsangàna rehefa miverina mamerina ny fifanarahan'i Cantwell amin'ny lalao baolina kitra alohan'ny nofinofiny akory ny hanatrika ny Sekoly Highgate. Fantatrao ve fa i Cantwell dia nilalao ho an'ny rafitra tanora an'ny Tan'ny Dereham Town?
Eny, azony antoka fa lasa izy ary lasa gaga rehefa naharesy ny tropy rehetra natolotra tamin'ny laharana tanora U8 sy U9 Tanora Tanora. Tsy fisaorana ny endrik'i Cantwell izay mpomba azy, nisy fitsipika vaovao nampidirana izay nahatonga ny mpilalao tsirairay hahazo isa tropy tokana. Tsy hery mahay mandanjalanja ve izy?
I Todd Cantwell miaraka amin'ireo tropy maro azony tao anatin'ny rafitry ny Tanora Tanànan'i Dereham. Sary: edp24.
Tantaran'i Todd Cantwell momba ny fahazazana sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Road To Fame Tantara
Talohan'ny nahalàny ny fetran'ny fametrahana ny tanànan'ny Tanànan'i Dereham tamin'ny Cantwell dia efa nifindra tao amin'ny Norwich Academy ny zaza 10, tamin'izy efa-taona tamin'izay, fa tsy dia haingana araka ny nantenainy. Raha tsiahivina, nahazo ny anjarany voalohany hiatrehana ny ekipa iraisam-pirenena i Cantwell miaraka amin'ny ekipan'ny U17 Angletera fony izy mbola 16 tao 2014.
I Todd Cantwell dia nantsoina ho any Angletera U17 Angletera fony izy mbola 16. Sary: TheFA.
Tamin'ny taona 2017, i Cantwell dia mpisolo anarana indroa ho an'ny lalao Norwich nefa tsy voatery nipoitra ekipa ho an'ny ekipa zokiolona. Ny afovoany nientanentana nihetsiketsika dia herinandro vitsivitsy tsy nankalazana ny fankalazana ny faha-20th fitsingerenan'ny andro nahaterahany rehefa nanao ny lalao tsy nahomby ho an'ny ekipa voalohany an'i Norwich City nandritra ny lalao Cup tamin'ny mpifanandrina tamin'i Chelsea tao Stamford Bridge tamin'ny Janoary 2018. Avy eo dia nindramina tamin'ny klioba tiana faharoa an'ny Fortuna Sittard izy nandritra ny vanim-potoana.
Tantaran'i Todd Cantwell momba ny fahazazana sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Mitsangàna mba haka tantara
Tao amin'ny klioban'ny manerantany faharoa, Fortuna Sittard, nanaporofo i Cantwell fa tsy duckling ratsy izy noho ny fandresena indroa ary nanome fanampiana telo tamin'ny fisehoana 10 fotsiny hanampiana ny klioba amin'ny fampiroboroboana ny Eredivisie amin'ny faran'ny fampielezana 2017-18.
Nanampy an'i Fortuna Sittard hahazo fampiroboroboana ny Eredivisie i Todd Cantwell. Sary: Twitter.
Niverina nody tany Norwich City, i Cantell no natolotra voalohany tamin'ny klioba nandritra ny lalao EFL Cup nifanandrina tamin'i Stevenage tamin'ny Aogositra 2018. Nataony izay hisehoana 24 amin'ny fifaninanana rehetra mandritra ny vanim-potoana 2018 / 2-9 rehefa nandresy ny anaram-boninahitra Sky Bet Championship ny tanàna Norwich.
Maimaim-poana mandraka ankehitriny dia nametraka ny tenany amin'ny maha-afovoany mahery vaika tao amin'ny Lalao Premier i Cantwell miaraka amin'ny maherifarany farany nanangona tanjona hanoherana an'i Chelsea amin'ny 25 ny volana aogositra 2019. Miaraka amin'ny Goal, Cantwell - miakanjo ny jersey 14 - no mpilalao voalohany Norfolk voalohany nahavita tanjona Premier League ho an'i Norwich City tao anatin'ny 14 taona. Ny ambiny, raha ny nambarany dia tantara.
Todd Cantwell nandresy ny tanjona voalohany amin'ny Ligy Premier tamin'ny volana Aogositra 2019 nandritra ny faharesena an'i 2-3 tany Norwich City tamin'ny taonan'i Norwich City. Sary: Pinkun.
Tantaran'i Todd Cantwell momba ny fahazazana sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Fiainana mifandraika amin'ny fiainana
Mena ny voloky, manga ny manga, manga i Cantwell, saingy tsy misy dikany ao aminy. Araka izany, tsy azo atao sokajy tokana izy io, na ny zanatambatra fantatra koa fa manambady amin'ny fotoana nanoratana.
Na eo aza izany, fantatsika fa mifantoka amin'ny fanamafisana ny toerany ao amin'ny tanàna iraisana Norwich izy, indrindra rehefa avy nanao sonia fifanarahana vaovao izay afaka mahita azy mijanona ao amin'ny klioba mandra-2022. Mety tsy ho ela akory raha nahita an'i sipa na wag na Cantwell dia mety hanana zanakalahy sy zanany vavy avy amin'ny sendika.
I Todd Cantwell dia mety ho mpitovo amin'ny fotoana nanoratana. Sary: LB sy Youtube.
Tantaran'i Todd Cantwell momba ny fahazazana sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Mitantara ny fiainam-pianakaviana
Zava-dehibe amin'i Cantwell ny fianakaviana ary ny zava-drehetra dia tonga faharoa ho an'ny mpiaro mankafy fianankaviana mahavariana. Izahay dia mitondra anao ny zava-misy momba ny mpikambana ao amin'ny fianakavian'i Cantwell.
Momba ny rain'i Todd Cantwell: Ny dadan'i Cantwell dia fantatra fa i Steve Cantwell. Ilay raim-pianakaviana manohana hatrany dia niantoka fa ny afovoan-tany dia nampifangaro ny lalao baolina kitra tamin'ny fanabeazana mahazatra hatramin'ny ambaratonga faharoa tany alohan'ny oniversite Norwich. Mirehareha i Steve hoe iza i Cantwell no lasa ary indraindray niaraka taminy tamin'ny hetsika fanaovana asa soa.
Mikasika ny renin'i Todd Cantwell: Na dia kely aza ny zavatra fantatra momba ny renin'i Cantwell dia nanampy tamin'ny fampiakarana ny mamatonalina izy ary nanatrika ny lalao sasany. Ny fanohanan'ny reny an'i Cantwell dia mihamitombo amin'ny fahaizany mamorona fitantarana tsara momba azy mandritra ny dinidinika. Mety tsy ho ela talohan'ny nametrahan'i Cantwell ny tanjon'ny reny-reny amin'ny fampisehoana sarin-tenany miaraka aminy ao amin'ny media sosialy.
Nitaiza ray aman-dreny mpanohana izay tsy dia fantatra firy i Todd Cantwell. Sary: TransferMarket ary ClipArtStation.
Mikasika ireo rahalahin'i Todd Cantwell: Cantwell dia manana mpiray tam-po roa fantatra, anisan'izany i Jordan sy ny rahavaviny Amber. Toa an'i Cantwell, i Jordan dia tia milalao baolina ary mamaritra ny tenany ho talenta baolina fahatelo ao amin'ny fianakaviana. Mandritra izany fotoana izany dia tsy dia fantatra loatra momba ny rahavavin'i Canwell Amber izay inoana fa zanakavavy tokana ao amin'ilay fianakaviana.
Momba ny fianakavian'i Todd Cantwell: Mifindra any amin'ny fianakavian'i Cantwell lehibe dia manana dadatoany antsoina hoe Kevin Owen, avy any Fakenham izy, na dia tsy dia fantatra firy momba ny nenitoany sy ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy. Ankoatr'izay, ny razana sy ny raiben'ny reny Cantwell dia tsy mbola fantatra raha ny zana-drahin'i afovoany mbola tsy fantatra izay tranga malaza tamin'ny fahazazany hatramin'ny fahazazany.
Tantaran'i Todd Cantwell momba ny fahazazana sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Ny fiainan'ny tena manokana
Ny toetran'ny Cantwell dia manana ny toetran'ny Pisces Zodiac izay misy fahatsapana fahaizana, fahaiza-mamorona ary intuition. Ny toetra dia nitambatra mba hanome azy persona mangatsiaka izay mampitambatra azy ho an'ireo namana sy mpankafy.
Eo am-pikaritana lalina ny endrika manintona ny toetran'i Cantwell, zara raha naseho ny antsipirihany momba ny fiainany manokana sy manokana izy. Araka izany, tsy dia fantatra firy amin'ny fialamboliny sy ny tombotsoany ankoatry ny fijerena sarimihetsika, milalao lalao video, fitsangatsanganana ary mandany fotoana miaraka amin'ny natiora.
Ny fitsangatsanganana dia iray amin'ireo fialambolin'i Todd Cantwell. Sary: Instagram.
Tantaran'i Todd Cantwell momba ny fahazazana sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Fiainana momba ny fiainana
Miresaka momba ny fomba nataon'i Cantwell sy handaniany ny volany, izy dia manorina lanja miafina, avy amin'ny karama azony azony amin'ny filalaovana baolina kitra voalohany. Ny mpandray anjara hafa mandray anjara amin'ny harenany dia avy amin'ny fifanarahana apetraka sy fampiasam-bola tsy miankina.
Na izany aza, Cantwell dia miaina fomba fiaina mahavelona satria miandrandra ny ho tonga mpahazo vola be izy amin'ny taona. Vokatr'izany dia mety ho elaela alohan'ny hahitan'ny mpankafy azy ny mitondra fiara exotic sy ny fananana trano lafo be toa ny mpilalao vazaha. Na izany aza dia lehibe ny fitsidihany ireo trano fandraisam-bahiny iraisam-pirenena amin'ny fialan-tsasatra mandritra ny fialantsasatra.
Todd Cantwell (farany ankavia) mankafy ny fialan-tsasatra ataony amin'ny hotely lafo vidy. Sary: Instagram.
Tantaran'i Todd Cantwell momba ny fahazazana sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Untold Facts
Manao ahoana marina ianao, i Todd Cantell mihoatra ny zavatra nosoratany momba azy tao amin'ity bio ity? Manolotra zavatra vitsivitsy tsy fantatra na tsy fantatra momba ny afovoan-tanàna izahay.
FIVAVAHANA: Tsy lehibe amin'ny fivavahana i Cantwell satria zara raha manome ny fahatsapana ho mpivavaka mandritra ny dinidinika na fankalazana tanjona amin'ny fotoana anoratana. Na izany aza, ny fanoherana dia manome alalana azy ho Kristianina.
Tatoo: Tsy manana zavakanto vatana izy amin'ny fotoana hanoratana ary mety hahazo tatoazy mandinika ny fitomboan'izy ireo ny teny famoronana. Mandra-pahatongan'izany, Cantwell no hany fomba noforonina.
Tsy manana tatoazy i Todd Cantwell. Sary: Instagram.
FAHAGAGANA sy FAMPIASANA: Ny afovoan-dàlana dia milalao amin'ny ligin'ny mpilalao baolina kitra izay tsy mifoka sy misotro amin'ny fotoana nanoratana. Ny antony hihoarana ny làlana mahasalama toy izany dia ny fiantohana fa mijanona amin'ny endrika tonga lafatra ny vatana hiatrehana ny fitakian'ny baolina kitra an-tampony.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny Tantaran'ny Ankizy Todd Cantwell miaraka amin'ny Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
Gary Cahill tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Andy Carroll ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Ny tantaran'ny tantaran'ny tantaran'ny tantaran'ny tantaran'ny tantaram-pahagagana nataon'i Luke Shaw, Plus Untold
Ryan Bertrand tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa